Video:-Maamulka DDSI oo ka hadlay xasuuqa Oromada kula kacday Soomaalida – Idil News
Video:-Maamulka DDSI oo ka hadlay xasuuqa Oromada kula kacday Soomaalida
Posted By: Idil News Staff September 14, 2017
Wasiirka u hadlay dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya ayaa sheegay in boqolaal Soomaali ah lagu lalayay sida uu hadalka u dhigay xuduuda u dhexeysa Ismaamulka Soomaalida Itoobiya iyo Oromada.
Wasiirka dhalinyada Maxamed Bille ‘Miig’ ayaa sheegay in dad Soomaali ah oo aad u badan lagu laayay deegaanada xuduudaha ee ay wadaagaan maamulada Soomaalida iyo Oromada Itoobiya, wuxuuna falkaas ku eedeeyey ciidamada maamulka Oromiya.
“Dhimasho aad u farobadan ayaa jirta, boqolaal ayeey gaarayaan dadka dhintay, hanti badana waa ay ku burburtay, maadaamaa waxa shaqadan fulinaya uu ciidan yahay, dad badan ayaa ku naf waayay” ayuu yiri wasiir Maxamed Bille.
Waxaa uu sheegay in ciidamo ka tirsan Oromiya ay mar walba weerar ka soo qaadayaan sida uu hadalka u dhigay deegaannada ay xuduuda kala wadaagaan.
‘’ Waxaa mar kasta weerarada soo qaadaya waa ciidamada booliiska Oromiya, meelaha aan xuduudaha ka leenahay shacabka degan ayay kusoo qaadaan, iyada oo dadka shacabka ee Soomaalida ah ee halkaas degen ay yihiin dad nabadgelyada jecel, waxayna soo weeraraan iyaga oo qaabaysan oo nidaam dowlad ku socda, dad badan ayaana ku naf waayay, dad kalana waa la barokiciyay” ayuu yiri wasiirka,hoos ka daawo muuqaalka.